Global Voices teny Malagasy » Diaben’ny Toetrandro Goavana Indrindra Tao Amerika Latina: An’arivony Mameno Ny Araben’i Lima · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Desambra 2014 12:42 GMT 1	 · Mpanoratra 350.org Nandika avylavitra
Sokajy: Amerika Latina, Però, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana, Zon'olombelona
Ny vondrom-piarahamonina Indizena no nitarika teny amin'ny lohalaharana tamin'ny diaben'ny olana momba ny toetrandro tao Lima. Nanome ny sary: Hoda Baraka
Nosoratan'i Hoda Baraka ho an'ny 350.org  ity, fikambanana iray manangana hetsika erantany momba ny toetrandro, ary naverina navoaka ato amin'ny Global Voices ho ampahany amin'ny fifanarahana fifanakalozana votoaty.
Tany ampiandohan'ity herinandro ity, maherin'ny 15.000 ireo olona avy any amin'ny faritra samihafa no nanao diabe teny an-dalamben'i Lima, nahatonga azy io ho ny diabe goavana indrindra momba ny toetrandro nisy teo amin'ny tantaran'i Amerika Latina.
Any amin'ny faritra, resaka olana momba ny zon'olombelona, tontolo iainana ary ara-pandrosoana no andraisana ny fiovàn'ny toetrandro; araka izany, tsy kisendrasendra ny nanomanana ilay diabe ho ny 10 Desambra, izay manamarika ny Andro Erantany ho an'ny Zon'olombelona. Itakiana ‘Fiovàn-drafitra. Fa tsy Fiovàn'ny Toetrandro’, nampiray vondrona maro samihafa avy amin'ny tontolo isankarazany ilay diabe, nitaky hetsika mivaingana sy tena izy hiatrehana ny olan'ny fiovàn'ny toetrandro.
Ireo vondrona nanao diabe dia nahitàna ny : vondrom-piarahamonina indizena, mpiompy, mpiasa, mpitrandraka harena ankibon'ny tany, vondron'ny tanora hatramin'ny vondrona ara-pinoana. Antomotr'ilay Diaben'ny Toetrandro ataon'ny Vahoaka any New York atsy ho atsy no miseho ity Diaben'ny Toetrandro ataon'ny Vahoaka ao Lima ity, ary manamafy ny fientanana tsy mitsaha-mitombo hisian'ny hetsika erantany ho an'ny toetrandro.
Ireto ambany ireto ny andian-tsary ahitàna taratra ny hery, ny fientanentanana ary ny fahasamihafàna tao anatin'ilay diabe.
“Ndeha Ho Avotantsika Ny Farihy Titicaca” hoy ity sorabaventy lanjain'ny vehivavy iray tonga avy any amin'ny faritr'i Andes ity (sisintany manelanelana an'i Pero sy Bôlivia) mitaky ny hanaovana hetsika ho fiarovana ilay farihy lehibe indrindra ao Amerika Latina. Sary : Hoda Baraka
Mpiasa an'arivony avy aminà sendika samihafa koa no tonga nanotrona ilay diabe. Sary: Hoda Baraka
Tanora mampiseho taokanto maroloko novokarina ho an'ilay diabe, tao amin'ny habaka ho an'ny kanto iandraiketan'ilay Fikambanan'ny Peroviana tanora mpikatroka mafàna fo “TierrActiva Peru”. Sary : Hoda Baraka
Vehivavy avy any amin'ny faritra ambanivohitra any Amerika Latina Afovoany, tonga avy lavitra mba ho afaka manana vintana haneho masoandro ireo fitarainana momba ny tontolo iainana avy any amin'ny faritra misy azy ireo. Sary: Hoda Baraka
“Desde El Yasuni Para El Mundo.” Indizena mpikatroka mafàna fo momba ny tontolo iainana avy any Yasuni, Ekoatora, mampita hafatra iray ho an'izao tontolo izao mba hiaro maika ny faritra Amazona ao Yasuni amin'ny fitrandrahana solika. Sary: Hoda Baraka
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/12/15/66411/